पर्यटकका लागि जीप यात्रा शुरु !
असोज २९, २०७५ PS
चितवन: चितवन राष्ट्रिय निजुञ्जमा वर्षात्का कारणले रोकिएको जीप सफारी पुनः शुरु भएको छ । वर्षा समाप्त भएसँगै दशैँको मुखमा जीप यात्रा शुरु गरिएको हो ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्यालका अनुसार असोज २५ गतेदेखि सौराहा, कसरा र मेघौलीबाट जीप सफारी खोलिएको हो । उहाँकाअनुसार सौराहाबाट ३०, मेघौली र कसराबाट आठ÷आठवटा जीप सफारीका लागि अनुमति दिइएको छ ।
पर्यटकलाई निकुञ्ज घुमाउन १० जना क्षमता भएको छानो नभएको जीप प्रयोग गरिँदै आइएको छ । ती जीप प्रवेश गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक रु चार हजार निकुञ्जले राजश्व पाउने गर्दछ । विदेशी पर्यटकले प्रवेश शुल्कबापत रु एक हजार ५००, सार्क मुलुकका पर्यटकले रु ७५० र नेपालीले रु १०० शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
निकुञ्ज सफारीमा जाने पर्यटकले वन क्षेत्रसँगै विभिन्न वन्यजन्तु, तालतलैया, चराचुरुङ्गी अवलोकन गर्न पाउँछन् । मुख्य रुपमा एकसिङ्गे गैँंडा, बाघ, भालु, गोही अवलोकनका लागि पर्यटक निकुञ्ज जाने गर्दछन् ।
यसअघि असार २५ गते वर्षात् शुरुभएसँगै निकुञ्जले सफारी बन्द गरेको थियो । त्यतिबेला सफारीको अनुमति लिएका नवलपरासीको अमलटारीका थारु भिलेज र टेम्पल टाईगरले यसवर्ष हालसम्म अनुमति लिन नआएको अर्यालले बताउनुभयो ।
अहिले पर्यटकका लागि अनुकुल याम भएकाले निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटक बढ्न शुरु भएको सौराहास्थित क्षेत्रीय होटल सङ्घका अध्यक्ष सुमन घिमिरेले बताउनुभयो ।
प्रकाशित : सोमबार, असोज २९, २०७५१७:४१
कोटेश्वरबाट चितुवाको छालासहित तीन पक्राउ
विदुरमा पानीको हाहाकार !
यस्ताे छ नेकपा (माअाेवादी) र नेपाल सरकारबीच भएकाे बिस्तृत शान्ति सम्झाैता (पूर्ण पाठ)
आफ्नै श्रीमतीलाई निर्घात कुटपिट गरि हत्या गर्ने धर्म पक्राउ !
रेलमार्ग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को कार्य अगाडि बढ्दै
आज पनि माधव नेपालको असन्तुष्टि बारे छलफल भएन ! अब के गर्लान् नेपाल ?
दार्चुलाबाट मात्रै करीब ७५० भेडा–च्याङ्ग्रा पोखरा तथा काठमाडौँ निर्यात !